gurans life insurance(gurans life insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
gurans life insurance
गुराँस लाइफ : बीमाशुल्क आर्जनमा ११४.६२%को उछाल, दाबीभुक्तानी ९०.३९%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। कम्पनीको बिहीबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बीमा शुलक आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११४.६२ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा बीमा शुल्क आर्जन ४४ करोड ८५ लाखमा...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य बिहीबार समायोजन गरेको छ। नेप्सेले गुराँस लाइफको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ५७६.७२ रुपैयाँ कायम गरेको छ। अब धितोपत्र दोस्रो बजारमा समायोजित मूल्यअनुसार नै यो कम्पनीको सेयर...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रस्तावित लाभांश पटकपटक संशोधन गरेको विषयमा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उक्त आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश दोस्रोपटक पनि संशोधन गरेपछि नेप्सले गत कात्तिक ४ गते पत्र पठाई गुराँस लाइफसँग यस विषयमा चित्तबुझ्दो जबाफ माग...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, किन घट्यो बोनस सेयर ५०%ले ?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो दसौँ वार्षिक साधारणसभाको मिति तय गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आगामी मंसिर ४ गते काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा आयाजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरु वितरण...
आजबाट गुराँस लाइफको लिलामी सेयरमा आवेदन खुल्यो
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आज मंगलबारदेखि अवितरित हकप्रद सेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री खुलाएको छ। कम्पनीले गत असार १४ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन नपरेको कुल ५ लाख ९० हजार १४ कित्ता सेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री खुलाएको हो। जसमा संस्थापक समूहको ३ लाख ३७ हजार ५६५...
भोलिबाट गुराँस लाइफले ५.९० लाख कित्ता सेयर लिलामीमा राख्ने, क–कसले दिन पाउँछ आवेदन?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले भोलि मंगलबार (असोज १३ गते) देखि अवितरित हकप्रद सेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले गत असार १४ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन नपरेको कुल ५ लाख ९० हजार १४ कित्ता सेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न लागेको हो। जसमा संस्थापक...
गुराँस लाइफले झन्डै ६ लाख कित्ता सेयर असोज १३ गतेबाट लिलामीमा राख्ने
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यही असोज १३ गतेदेखि अवितरित हकप्रद सेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले गत असार १४ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन नपरेको कुल ५ लाख ९० हजार १४ कित्ता सेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न लागेको हो। जसमा संस्थापक समूहको ३ लाख ३७...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले घटायो लाभांश, अब सेयरधनीले कति पाउँछन् ?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको लाभांश परिमार्जन गरी घटाएको छ। कम्पनीको गत वर्ष कात्तिक १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चित मुनाफाबाट चुक्तापुँजी ९३ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँको १३.१० प्रतिशतले हुन आउने १२ करोड २९ लाख ६०...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको हकप्रदमा खरिद आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सतप्रतिशत हकप्रद सेयरमा खरिद आवेदन दिने आज आइतबार अन्तिम मौका रहेको छ। कम्पनीले गत असार १४ गतेदेखि चुक्तापुँजी ९३ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँको १ः१ अनुपात (अर्थात् १ सेयरबराबर १) हकप्रद बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका ९३ लाख ८५ हजार २०० कित्ता हकप्रद...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर आजबाट बिक्री खुला
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर आज आइतबारदेखि बिक्री खुला गरिएको छ। कम्पनीले चुक्तापुँजी ९३ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँको १ः१ अनुपात (अर्थात् १ सेयरबराबर १) हकप्रद बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका ९३ लाख ८५ हजार २०० कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गरेको छ। हकप्रद...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको १००% हकप्रद असार १४ बाट बिक्री खुला हुने, कसले किन्न पाउँछ?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर यही असार १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरिने भएको छ। कम्पनीले चुक्तापुँजी ९३ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँको १ः१ अनुपात (अर्थात् १ सेयरबराबर १) हकप्रद बिक्री खुला गर्ने भएको हो। यसको मतलब कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका ९३ लाख ८५ हजार २०० कित्ता हकप्रद बिक्री खुला...
गुराँस लाइफको बिमाशुल्क इसेवाबाट तिर्न मिल्ने
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको बीमा शुल्क इसेवाबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । योसँगै गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका बिमितले आफ्नो नियमित बिमा शुल्क इसेवाको मोबाईल एप्स तथा इन्टरनेटबाट सहजै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै, इसेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले इसेवाका देशभर रहेका कुनै पनि जोन पोइन्टमार्फत बीमा...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको १००% हकप्रद चैत २० गतेबाट बिक्री खुला हुने, क–कसले किन्न पाउँछन्?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर यही चैत २० गतेदेखि बिक्री खुला गरिने भएको छ। कम्पनीले चुक्तापुँजी ९३ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँको १ः१ अनुपात (अर्थात् १ सेयरबराबर १) हकप्रद बिक्री खुला गर्ने भएको हो। यसको मतलब कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका ९३ लाख ८५ हजार २०० कित्ता हकप्रद बिक्री...
हकप्रदका लागि गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति?
काठमाण्डौ । शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बिहीबार सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले शतप्रतिशत हकप्रद सेयरका लागि गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ४७० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अब...
कीर्तिपुरको नयाँबजारमा मेगा बैंकको नयाँ शाखा
नेप्सेले गर्यो २३०० को विन्दु पार, यी हुन् बजार बढ्नुका प्रमुख आधार